၂ဝ၂ဝရှေးကောကျပှဲနှငျ့ မွနျမာမှတျစလငျ လူ့အဖှဲ့အစညျး၏ အခနျးကဏ်ဍ – Friday Times
ပွညျသူအမြားစုတငျမွှောကျထားသညျ့ အမြိုးသားဒီမိုကရစေီအဖှဲ့ခြုပျကဦးဆောငျတဲ့ အစိုးရသကျတမျးသညျ မကွာမီကာလတှငျ ၅နှဈပွညျ့မွောကျပွီဖွဈ၍ ရှေးကောကျပှဲမြားပွနျလညျကငျြးပပွုလုပျရတော့မညျ့အခြိနျသို့ ရောကျရှိလာပွီဖွဈပါသညျ။ ပွီးခဲ့သညျ့ ၂ဝ၁၅ခုနှဈက ကငျြးပပွုလုပျသညျ့ရှေးကောကျပှဲတှငျ နိုငျငံသားအစ်စလာမျဘာသာဝငျမြားသညျ လူအမြားစုတို့နှငျ့ တဈထပျတညျးရပျတညျကာ ဒီခြုပျပါတီကို သောငျပွိုကမျးပွို အနိုငျရအောငျမဲပေးသညျ့အထဲတှငျ တဈထောငျ့တဈနရော ကနပေါဝငျခဲ့ကွပွီးဖွဈပါသညျ။ ထိုကဲ့သို့မဲပေးခဲ့ရခွငျးမှာလညျး ယခငျစဈအစိုးရလကျထကျမြားနှငျ့ အရပျသားအစိုးရဟု အမညျတပျထားသညျ့ အစိုးရဟောငျးလကျထကျမြားတှငျ နိုငျငံသားအခငျြးခငျြးခှဲခွား ဆကျဆံမှုမြား၊ တိုငျးရငျးသားအခငျြးခငျြးခှဲခွားဆကျဆံခံရမှုမြား၊ ဘာသာရေးလူမြိုးရေးခှဲခွားဆကျဆံခံရမှုမြားမှ လှတျမွောကျစရေနျ မြှျောလငျ့ရညျသနျပွီး ဒီခြုပျအစိုးရကို မဲပေး၍တှနျးတငျခဲ့ကွခွငျးဖွဈပါသညျ။ သို့သျောအာဏာရ ဒီခြုပျပါတီ၏ဦးဆောငျမှုဖွငျ့အုပျခြုပျသညျ့ အစိုးရသကျတမျး ၅နှဈတာကာလတှငျ ထိုကဲ့သို့ ခှဲခွားဆကျဆံမှုမြားမှာ ဆကျလကျတညျရှိနလေကျြပငျဖွဈသညျ။ ထို့ကွောငျ့ လာမညျ့ ရှေးကောကျပှဲတှငျ မွနျမာနိုငျငံသားအစ်စလာမျဘာသာဝငျ မြားအနဖွေငျ့ မိမိတို့၏နိုငျငံသား အခှငျ့အရေးမြား ပွညျ့ပွညျ့ဝဝရရှိရနျအတှကျ ဒီခြုပျအစိုးရကိုပဲ မဲဆကျပေးမညျလား၊ သို့တညျးမဟုတျ မညျသညျ့လမျးကွောငျးဖွငျ့ သှားကွမညျလဲဆိုသညျကို သိရှိလိုပါသဖွငျ့ Friday Times Journal ကနေ၍ မွနျမာနိုငျငံသားအစ်စလာမျဘာသာဝငျမြား၏ သဘောထား အမွငျမြားကောကျခံပွီး အပတျစဉျစုစညျးဖျောပွပေးသှားမညျဖွဈပါသညျ။
မေး။ ။၂ဝ၁၅ခုနှဈတှငျ ရှေးကောကျပှဲ အနိုငျရခဲ့သညျ့ အမြိုးသားဒီမိုကရစေီအဖှဲ့ခြုပျက ဦးဆောငျသညျ့ အစိုးရအဖှဲ့၏ ဆောငျရှကျခကျြမြားကို အားရပါသလား။
ဖွေ။ ။ကြှနျတေျာ့အဖွကေို မှတျစလငျ အမြားစုကကွိုကျမှာမဟုတျဘူး၊ စိတျအနှောငျ့အယှကျ ဖွဈမှာတောငျ စိုးရိမျရပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ အရှိအမွငျ အတိုငျးပဲဖွမှောပါ။
အစိုးရရဲ့ဆောငျရှကျခကျြတှထေဲမှာ ကွိုကျတာ ရှိသလို၊ မကွိုကျတာလညျးရှိပါတယျ။
NVကတျဆကျပွီးထုတျပေးနတော၊ မှတျစလငျတှေ နဲ့ ထိတှဆေ့ကျဆံမှု အားနညျးတာတှကေိုမကွိုကျဘူး။
ရခိုငျနဲ့ လူနညျးစုပွဿနာတှအေပျေါ ကိုငျတှယျ ဖွရှေငျးတာတှမှော အားနညျးခကျြလိုအပျခကျြအမြား ကွီး ရှိနပေါသေးတယျ။
ဒါပမေဲ့လညျး ပွောငျးလဲသငျ့တာ အားလုံးကို ဒီသကျတမျး(၅)နှဈလောကျနဲ့ ပွောငျးလဲဖို့ဆိုတာ လကျ တှမေ့ဖွဈနိုငျပါဘူး။ အမရေိကနျသမ်မတတှကေို လာ လုပျခိုငျးတောငျ မရနိုငျပါဘူး။ ကွိုကျတာ တှကေတော့ အမုနျးစကားပွောဆိုနတော ရပျတနျ့ဖို့၊ အကွမျးဖကျမှု တှကေို ထပျတိုးမလာ ဖို့ဆောငျရှကျတာတှေ၊ ပွဿနာ ဖနျတီးသူတှကေို အားမပေးတာ၊ အရေးယူတာတှကေို ကွိုကျပါတယျ။
အရငျအစိုးရတှတေုနျးက ဒါတှကေိုမဟနျ့တားရုံမက အားပေးထောကျပံ့မှုတှလေုပျခဲ့တယျ၊ အမုနျးစကားပွောတာတှေ၊ ပိုစတာတှကေိုငျပွီးတော့ လူအမြားမွငျကှငျးမှာ အစ်စလာမျဘာသာကို စျောကားတာတှေ နစေ့ဉျ ရကျဆကျ လုပျခဲ့ကွတယျ၊ မှတျစလငျတှအေပျေါ ပျေါပျေါထငျ အကွမျးဖကျတာတှကေို ဟနျ့တာအရေး ယူဖို့ ပကျြကှကျတာတှရှေိခဲ့တယျ။
ဒါ့ထကျဆိုးတာကတရားခံတှကေိုအားပေးထောကျပံ့ တာတှကေိုပါ လုပျခဲ့ကွတယျ။ ဘယျလောကျအထိ ဆိုး လညျးဆို နိုငျငံတျောက အသိအမှတျပွုထားတဲ့ ဘာသာ ကွီးတဈခုကို ”သားဖေါကျနှုနျးမွနျ…တိရစ်ဆာနျဝါဒ ဆနျ့ကငျြကွ” ဆိုတဲ့ ပိုစတာမြားနဲ့ အခွားစျောကားမှုမြိုးစုံ ပါတဲ့ပိုစတာတှကေိုငျပွီး စျောကားတာတှေ၊ စာအုပျ စာစောငျမြားထုတျပွီးစျောကား လှုံ့ဆျောတာတှကေို ဟနျ့တားအရေးယူ မှုတှမေလုပျခဲ့ဘူး။
မိတ်ထီလာနဲ့ ရခိုငျပွညျနယျအပါအဝငျ နရောအတျော မြားမြားမှာ လူနညျးစုတှကေို အကွမျးဖကျတိုကျခိုကျ တာတှေ၊ ညှဉျးပနျးနှိပျစကျသတျဖွတျတာတှေ မီးရှို့တာ တှကေိုလုံလောကျတဲ့ဟနျ့တားအရေးယူမှုတှေ မလုပျခဲ့ဘူး။ မိတ်ထီလာမှာဆိုရငျ မှတျစလငျ လူနညျးစုတှရေဲ့ အိမျတှေ၊ ဆိုငျတှကေို လုယကျမီးရှို့ဖကျြဆီးတာတှေ အပွီးသိမျးယူ လိုကျတာတှေ၊ သာသနိကအဆောကျအအုံတှကေို မီးရှို့ဖကျြဆီးတာကိုမဟနျ့တားတဲ့အပွငျ ဘာသာရေး အဆောကျအအုံတှကေိုပါ ပိတျပဈခဲ့တာတှကေို အစိုးရ ကိုယျတိုငျကြူးလှနျခဲ့ကွတယျ။
”မှတျစလငျတှကေို ခေါငျးမဖျောဝံ့အောငျလုပျရ မယျ။ ရခိုငျဒသေကို အစ်စရေးတှကေ ပါလကျစတိုငျး တှကေို လုပျသလိုလုပျပဈရမယျ” စတဲ့ အမုနျးတရား လှုံ့ဆျောဖနျတီးသူတှကေို အရေးယူတာ တှမေလုပျတဲ့အပွငျ အားပေးခြီးမွှောကျမှုတှပေါလုပျခဲ့ကွတယျ။
အခုအစိုးရက ဒါတှမေလုပျတဲ့အပွငျ အရေးယူခဲ့ တာတှတေောငျ ရှိခဲ့တယျ။ အတိုခြုံ့ပွောရရငျ အရငျအစိုးရက ဘာသာရေးမုနျး တီးရေးလှုံ့ဆျောသူတှေ အကွမျးဖကျသူတှကေို အားပေးခဲ့ တယျ ဘာသာရေးကို နိုငျငံရေးအာဏာအရေးအတှကျ အသုံးခခြဲ့တယျ။
အခုအစိုးရက ဒါတှမေလုပျဘူး။ဒါကိုအသိအမှတျ မပွုပါတယျ၊ ဒါပမေဲ့မလုံလောကျသေးဖူး။ ဒီထကျပို လုပျဖို့လို ပါသေးတယျ။
မေး။ ။အမြိုးသားဒီမိုကရစေီအဖှဲ့ခြုပျက ဦးဆောငျတဲ့အစိုးရအဖှဲ့ရဲ့ လကျအောကျမှာနိုငျငံ သားအခှငျ့အရေးတှေ၊ လူမြိုးရေးအခှငျ့အရေးတှေ၊ ဘာသာရေးအခှငျ့အရေးတှေ တနျးတူရရှိတယျလို့ ခံစားရပါသလား။ မရရှိဘူလို့ဆိုရငျ ဘာကွောငျ့လို့ ထငျပါသလဲ။
ဖွေ ။ ။ မရရှိသေးပါဘူး၊ အထကျမှာပွောခဲ့သလို အမြားကွီးလိုပါသေးတယျ။ အကွောငျးတရားက အစိုးရရဲ့ စှမျးဆောငျမှုအား နညျးတာတှေ၊ ဘာသာရေးကို အာဏာအရေးအတှကျအသုံးခသြူတှရေဲ့ အန်တရာယျနဲ့ ဖိအားတှေ ကွီးမားစှာရှိနတောတှေ၊ စဈဘကျနဲ့ အာဏာခှဲဝေးယူထားရပွီး ပွညျ့ဝတဲ့ အာဏာဆကျမရှိတာတှကွေောငျ့လို့ ထငျပါတယျ။
မေး။ ။မွနျမာနိုငျငံတှငျးမှာ မှီတငျး နထေိုငျကွတဲ့ လူနညျးစုမြားအခှငျ့အရေးအတှကျ ရှေးကောကျပှဲ ဝငျရောကျမယျ့ပါတီတှေ ဒါမှမဟုတျ နောကျတကျလာမယျ့အစိုးရထံကနေ ဘယျလိုလုပျ ဆောငျပေးခကျြတှကေို လိုခငျြပါလဲ။
ဖွေ။ ။ရိုဟငျဂြာပွဿနာကို ကာယကံရှငျခေါငျးဆောငျ တှညှေိနှိုငျးပွီး နိုငျငံတကာနဲ့ ပူးပေါငျးဖွရှေငျး ဆောငျရှကျ စခေငျြတယျ။
မှတျစလငျလူနညျးစုတှကေို နိုငျငံရေးအပါအဝငျ ကဏ်ဍပေါငျးစုံက ဖယျကွဉျနတောတှေ၊ ခှဲခွားဆကျဆံ နတောကို ရပျတနျ့အောငျလုပျရမယျ။ ဘာသာလူမြိုး အပျေါအခွမေခံဘဲ အရညျအခငျြးအလိုကျ ပါဝငျခှငျ့ပွု စခေငျြတယျ။
အမုနျးတရားလှုံ့ဆျောဖနျတီးသူတှကေို ဆကျပွီး ပွတျပွတျသားသား အရေးယူတားဆီး ပေးသငျ့တယျ။
ဘာသာရေးအဆောကျအအုံတှပေိတျသိမျးထားတာ တှကေိုပွနျလညျ ဖှငျ့လှဈခှငျ့၊ ပိုငျဆိုငျခှငျ့၊ ပွုပွငျခှငျ့၊ တညျဆောကျခှငျ့တှနေဲ့ နိုငျငံသား စိစဈရေးလုပျငနျးတှေ ကို တနျးတူစဈဆေး ထုတျပေးခွငျးမြား အပါအဝငျ နိုငျငံ သားခငျြး တနျးတူညီမြှဖွဈဖို့၊ ခှဲခွားမှုပပြောကျဖို့ မဖွဈ မနအေားစိုကျဆောငျရှကျစခေငျြတယျ။
မေး။ ။လူနညျးစုတှအေနနေဲ့ မိမိတို့ လူ့ အစုအဝေးကိုကိုယျစားပွုတဲ့ ပါတီတှေ ဒါမှမဟုတျ တဈသီးပုဂ်ဂလ လှတျတျောကိုယျစားလှယျတှကေို လာမယျ့ရှေးကောကျပှဲတှငျ ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျ စလေိုပါသလား၊ ဘာကွောငျ့ ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျ သငျ့၊ မသငျ့ကို ပွောပေးပါ။
ဖွေ ။ ။ နိုငျငံရေးပါတီမြားရော အရပျဘကျ အဖှဲ့အစညျးမြား အားကောငျးလာအောငျလုပျသငျ့သလို လူနညျးစုပါတီနဲ့ အာဏာရပါတီကပါ လှတျတျော ကိုယျစားလှယျ ဖွဈအောငျကွိုးစားသငျ့တယျ။ အထူးသဖွငျ့ လူထုထောကျခံမှု အမြားဆုံးပါတီကနေ ဝငျရောကျ အရှေးခံနိုငျအောငျ ကွိုးစားသငျ့တယျ။ သကျဆိုငျရာပါတီက လကျခံလာအောငျ နိုငျငံရေးသမား ကာယကံရှငျတှေ ကိုယျတိုငျကွိုးစားရမယျ။ ဒီရှေးကောကျပှဲမှာ ပါတီဘကျ ကလညျး လကျခံမယျလို့ထငျပါတယျ။ ကိုမွအေး၊ ဒျေါဝငျး မွမွ၊ ကိုကွညျလငျ၊ ကိုထှနျးကွညျ၊ ကိုစညျသူမောငျတို့ ကွိုးစားကွမယျ ဆိုရငျရနိုငျပါတယျ။ ပါတီက လကျမခံ ခဲ့ရငျတော့ အခြို့ပုဂ်ဂိုလျမြား တဈသီးပုဂ်ဂလဝငျပွိုငျသငျ့ ပါတယျ။ ဥပမာ- ကိုမွအေးပါတီက လကျသငျ့မခံရငျ ပနျးဘဲတနျးက တဈသီးပုဂ်ဂအနနေဲ့ ဝငျပွိုငျသငျ့ပါတယျ။ အမြားလကျခံတဲ့ အခွားပုဂ်ဂိုလျမြားလညျး အခွားအမာခံ မဲဆန်ဒနယျမွရှေိရငျ တဈသီးပုဂ်ဂလ ဝငျပွိုငျနိုငျပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ အမြားလကျခံနိုငျခွရှေိတဲ့ ပုဂ်ဂိုလျတှကေိုယျတိုငျ ကွိုးစားကွဖို့အရေးကွီးပါတယျ။ ဟိုလူ့လှဲခြ၊ ဒီလူ့လှဲခြ မလုပျဘဲ ကိုယျတိုငျဝငျအရှေးခံမှသာ လကျတှအေ့ောငျ မွငျနိုငျမှာပါ။ နိုငျငံရေးသွဇာမရှိတဲ့ လူတဈရာအတှကျ ကွိုးစားတာထကျ နိုငျငံရေးသွဇာရှိတဲ့ ပုဂ်ဂိုလျအခြို့ အတှကျသာ အားစိုကျပွီး ကဈြကဈြလဈြလဈြ ဆောငျရှကျ ရငျ အဆငျပွနေိုငျပါတယျ။
( ကုရျအာနျအသိပညာပွနျ့ပှားရေးအဖှဲ့- SEQK )
မေး။ ။၂ဝ၁၅ခုနှဈတှငျ ရှေးကောကျပှဲ အနိုငျရခဲ့သညျ့ အမြိုးသားဒီမိုကရစေီအဖှဲ့ခြုပျက ဦးဆောငျသညျ့ အစိုးရအဖှဲ့၏ ဆောငျရှကျခကျြမြား ကို အားရပါသလား။
ဖွေ။ ။မေးခှနျးတှမေဖွဆေိုခငျ ပဏာမ ဆှေးနှေးလိုတဲ့အခကျြတှကေ . . .
(၁၉၉ဝ)ရှေးကောကျပှဲတှငျလညျးကောငျး၊ (၂ဝ၁၅) ရှေးကောကျပှဲတှငျလညျးကောငျး မွနျမာမှတျစလငျ လူနညျးစု (Religious bused minority community) က NLDပါတီကို အုတျအျောသောငျးတငျး မဲပေးခဲ့ပါတယျ။ နိုငျငံရေးအခွအေနအေရ အဲဒီကာလနှဈခုမှာ NLDပါတီကို မဲပေးခဲ့ခွငျးသညျ လုံးဝမှားယှငျးမှု မရှိပါဘူး။ လိုအပျခကျြအရ မဲပေးခဲ့ခွငျးသာဖွဈတယျ။ သို့သျော လာမယျ့(၂ဝ၂ဝ)ပွညျ့နှဈအထှထှေရှေေးကောကျပှဲမှာ NLDပါတီအနနေဲ့ဖွဈစေ၊ အခွားမညျသညျ့ပါတီဖွဈစေ မှတျစလငျတို့ရဲ့မဲပွားကိုလိုခငျြရငျ အောကျပါမေးခှနျး (၂) ခကျြကိုတော့ အဖွပေေးဖို့လိုအပျတယျလို့ ယူဆမိပါတယျ။
(၁)မွနျမာနိုငျငံသားမှတျစလငျတို့၏ နိုငျငံသား (Citizenship) ဖွဈခှငျ့နှငျ့ပတျသကျ၍ အဟနျ့အတားဖွဈ နခွေငျး၊ အခြိနျဆှဲလေးဖငျ့နခွေငျးစတဲ့ အကနျ့အသတျ မြားကို မညျကဲ့သို့ဖွရှေငျးဆောငျရှကျပေးမလဲ။
(၂) အစ်စလာမျဘာသာဝငျနိုငျငံသားမြား ဘာသာ ရေးယုံကွညျခကျြကွောငျ့ ခှဲခွားဆကျဆံခံနရေခွငျး (Discrimination on the busis of Religious belief) ကို မညျကဲ့သို့အာမခံခကျြပေးပွီး ကုစားဖွရှေငျးပေးမှာလဲ ဆိုတာပါ။
အစ်စလာမျဘာသာဝငျ မှတျစလငျတို့အနနေဲ့ လာမယျ့(၂ဝ၂ဝ) အထှထှေရှေေးကောကျပှဲတှငျ ယခငျ ရှေးကောကျပှဲမြားမှာထကျ မိမိတို့၏မဲပွားကို မိမိတို့ကိုယျ တိုငျ ပိုမိုတနျဖိုးထားလာကွမညျဖွဈသလို တဈဖကျက မဲရယူလိုကျမယျ့ပါတီ (သိုမဟုတျ) တဈသီးပုဂ်ဂလအမတျ လောငျးမြားကလညျး မိမိတို့၏မဲပွားအပျေါ တနျဖိုးထား လာစခေငျြနကွေပွီဖွဈပါတယျ။ လကျရှိအနအေထားမှာ (၂ဝ၂ဝ)ရှေးကောကျပှဲတှငျ အစ်စလာမျဘာသာရေးဆိုငျရာ လူနညျးစုတှကေ ပွီးခဲ့တဲ့ နိုငျငံရေးသကျတမျးရဲ့အတှေ့ အကွုံတှအေရ ယုံယုံကွညျကွညျမဲပေးဖို့ အားနညျးလကျြ ရှိပါတယျ။
(၂ဝ၁၅) ခုနှဈတှငျ ရှေးကောကျပှဲအနိုငျရခဲ့သော NLDဦးဆောငျသညျ့ အစိုးရအဖှဲ့၏ ဆောငျရှကျခကျြ မြားသညျ တဈနိုငျငံလုံးအတိုငျးအတာအရ အားရကနြေပျ မှုမရှိခဲ့ကွပါ။ အဘယျကွောငျ့ဆိုသျော မိမိတို့ကိုရှေး ကောကျပှဲမတိုငျမီကပေးထားသော ကတိကဝတျဖွဈသညျ့ (၂ဝဝ၈) ဖှဲ့စညျးပုံအခွခေံဥပဒကေိုပွငျဆငျရနျ မစှမျး ဆောငျနိုငျခွငျးကွောငျ့ဖွဈသညျ။ တဈဖကျကလညျး စီးပှား ရေးအကပျြအတညျးမြားကွောငျ့ ပွညျသူတို့၏ စားဝတျ နရေေးကိုထိခိုကျလာရမှုမြားရှိနတေယျ။
မေး။ ။အမြိုးသားဒီမိုကရစေီအဖှဲ့ခြုပျက ဦးဆောငျတဲ့အစိုးရအဖှဲ့ရဲ့ လကျအောကျမှာ နိုငျငံ သားအခှငျ့အရေးတှေ၊ လူမြိုးရေးအခှငျ့အရေးတှေ၊ ဘာသာရေးအခှငျ့အရေးတှေ တနျးတူရရှိတယျလို့ ခံစားရပါသလား။ မရရှိဘူးလို့ဆိုရငျ ဘာကွောငျ့လို့ ထငျပါသလဲ။
ဖွေ။ ။NLDပါတီအစိုးရအဖှဲ့၏ လကျ အောကျတှငျ နိုငျငံသားအခှငျ့အရေး၊ လူမြိုးရေးဆိုငျရာ အခှငျ့အရေး၊ ဘာသာရေးဆိုငျရာအခှငျ့အရေးမြား တနျးတူရညျတူမရရှိဘူးလို့ ခံစားမိပါတယျ။
အဲဒီလိုမရရှိခွငျးက NLDပါတီအနနေဲ့ အရငျ အစိုးရမြားထကျပငျ အထူးသဖွငျ့မှတျစလငျလူ့အစုအဖှဲ့နဲ့ ထိတှမှေု့နညျးခွငျး၊ မှတျစလငျလူ့အဖှဲ့ အစညျးနှငျ့ နီးနီး ကပျကပျဆကျဆံမယျဆိုရငျ တဈဖကျက အစှနျးရောကျ အမြိုးသားရေးဝါဒီ (Radical nationalist)မြားရဲ့ အထငျ လှဲစှပျစှဲမှုမြား ခံရမညျ ကိုစိုးရိမျခွငျး၊ ဒီမိုကရစေီရဲ့ အခွခေံ အုတျမွဈဖွဈတဲ့ Pluralism (မတူစုံလငျကှဲပွားသော ပဒသောစုံယဉျကြေးမှု) စနဈကို အလေးမပေးတဲ့အပျေါ လှတျတျောအတှငျးမှာ မှတျစလငျ အမတျမရှိခွငျး၊ ဟိန်ဒူ ဘာသာဝငျလှတျတျော အမတျမရှိခွငျး၊ လှတျတျောအတှငျး လူနညျးစု ဘာသာဝငျတို့ရဲ့ အရေးကိစ်စဆှေးနှေးမှု တှေ အသံတိတျပြောကျကှယျနခွေငျးက ရလဒျတှပေဲဖွဈ ပါတယျ။
မေး။ ။မွနျမာနိုငျငံတှငျးမှာ မှီတငျး နထေိုငျကွတဲ့ လူနညျးစုမြားအခှငျ့အရေးအတှကျ ရှေးကောကျပှဲဝငျရောကျမယျ့ပါတီတှေ ဒါမှမဟုတျ နောကျတကျလာမယျ့အစိုးရထံကနေ ဘယျလို လုပျဆောငျပေးခကျြတှကေို လိုခငျြပါလဲ။
ဖွေ။ ။မွနျမာနိုငျငံအတှငျးမှီတငျးနထေိုငျ ကွတဲ့ လူနညျးစုအခှငျ့အရေးအတှကျ ရှေးကောကျပှဲ ဝငျရောကျမယျ့ပါတီ တှဖွေဈဖွဈ၊ နောငျတကျလာမယျ့ အစိုးရအဖှဲ့ဖွဈဖွဈ၊ မိမိကိုမဲပေးလိုကျတဲ့ ပွညျသူတှရေဲ့ နိုငျငံသားဖွဈမှု (Citizenship)နဲ့ ဘာသာရေး ယုံကွညျခကျြကွောငျ့ ခှဲခွား ဆကျဆံခံနရေတာတှေ (Discrimination on the basis of Religious belief)ကို အာမခံခကျြပေးပွီး ကုစား ဖွရှေငျးပေးစလေိုပါတယျ။
မေး။ ။လူနညျးစုတှအေနနေဲ့ မိမိတို့ လူ့အစုအဝေးကိုကိုယျစားပွုတဲ့ ပါတီတှေ ဒါမှ မဟုတျ တဈသီးပုဂ်ဂလ လှတျတျောကိုယျစားလှယျ တှကေို လာမယျ့ရှေးကောကျပှဲတှငျ ဝငျရောကျယှဉျ ပွိုငျစလေိုပါသလား၊ ဘာကွောငျ့ ဝငျရောကျယှဉျ ပွိုငျသငျ့၊ မသငျ့ကို ပွောပေးပါ။
ဖွေ။ ။လူနညျးစုတိုငျးရငျးသားတှေ၊ ဘာသာ ရေးဆိုငျရာလူနညျးစုမြားအနနေဲ့ မိမိတို့လူ့အစုအဖှဲ့ကို ကိုယျစားပွုတဲ့ပါတီတှေ၊ တဈသီးပုဂ်ဂလလှတျတျောကိုယျ စားလှယျတှအေနနေဲ့ လာမယျ့၂ဝ၂ဝအထှထှေရှေေး ကောကျပှဲတှငျ ဝငျရောကျအရှေးခံခွငျးကိုအပွုသဘော အဖွဈလကျခံအားပေးပါတယျ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ပွီးခဲ့တဲ့ သကျတမျးတဈလြှောကျမှာ အထူးသဖွငျ့ဘာသာရေး ယုံကွညျခကျြဆိုငျရာလူနညျးစုတို့ရဲ့ အရေးကိစ်စတှကေို သကျဆိုငျရာတာဝနျရှိသူတို့က အရေးတယူဆှေးနှေးခွငျး၊ ထငျသာမွငျသာရှိစှာ ဆောငျရှကျ ပေးခွငျးမြားက မတှရေ့ သလောကျဖွဈခဲ့ရပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ လှတျတျောအတှငျး မိမိအစုအဖှဲ့ရဲ့အရေးကိစ်စကို မိမိတို့ကိုယျတိုငျ တောငျးဆို ဆှေးနှေးဖွရှေငျးခွငျးကသာ အကောငျးဆုံးပငျဖွဈမယျ လို့ ယုံကွညျပါတယျ။
ဖွေ။ ။အားရပါတယျ။ကနြေပျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဘာသာသာသနာရေးကိစ်စ လူမြိုးရေးကိစ်စတှေ မှာတော့ ယခငျအစိုးရလကျထကျအတိုငျး မထူးမခွားနား ပါဘဲ။ အတူတူပါဘဲ။ အခွားဟာသတှဲပွောရလြှငျ ယခငျ အစိုးရလကျထကျက တဈရာဖိုးကားနှဈစီးအဖွဈ အောကျ ခွလေူတနျးစားက ကားဝယျစီးနိုငျပမေယျ့ အခုအစိုးရ လကျထကျမှာ ကားတဈစီး တဈရာ့ငါးဆယျဖွဈနပေါ တယျ။ လမျးတှတေော့ကောငျးလာတာပေါ့။ ပိုရှငျးရှငျး လငျးလငျးမွငျစခေငျြတော့ ယနအေ့စိုးရရဲ့နိုငျငံရေး စီးပှားရေး အုပျခြုပျရေးတှကေ အိန်ဒိယနိုငျငံရဲ့နိုငျငံရေးရုပျရှငျဇတျကားတှနေဲ့့တဈထပျတညျးကနြပေါ တယျ။
မေး။ ။အမြိုးသားဒီမိုကရစေီအဖှဲ့ခြုပျက ဦးဆောငျတဲ့အစိုးရအဖှဲ့ရဲ့ လကျအောကျမှာ နိုငျငံ သားအခှငျ့အရေးတှေ၊ လူမြိုးရေးအခှငျ့အရေးတှေ၊ ဘာသာရေးအခှငျ့အရေးတှေ တနျးတူရရှိတယျလို့ ခံစားရပါသလား။ မရရှိဘူလို့ဆိုရငျ ဘာ့ကွောငျ့လို့ ထငျပါသလဲ။
ဖွေ။ ။တနျးတူအခှငျ့အရေးမခံစားရ ပါဘူး။ တနျးတူမရရှိပါဘူး။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ ကြှနျတျောတို့က အစ်စလာမျသာသနာဝငျတှေ ဖွဈနကွေလို့ ပါဘဲ။ ယခငျအစိုးရလကျထကျမှာ အစိုးရနဲ့ပွညျသူကွား မှာ ကြှနျတျောတို့ညှပျပိတျမိနတေယျ။ ယခုအစိုးရလကျ ထကျမှာ ကြှနျတျောတို့က အစိုးရ၊ တပျမတျော၊ ပွညျသူ သုံးပှငျ့ဆိုငျကွားမှာ တံစားခံ မဖွဈအောငျ အနအေထိုငျ အထူးသတိထားနရေသညျ့ ဘဝအခွအေနဖွေဈနေ ပါတယျ။
ကြှနျတျောတို့ စောငျ့ကွညျ့နပေါတယျ။ဘာလုပျရ မညျလညျး အကောငျးဆုံးပွငျဆကျထားပါတယျ။ အဓိကကတော့ ငွိမျးခမျြးခငျြတာပေါ့ဗြာ။
ဖွေ။ ။နောငျတတျလာမညျ့ အစိုးရက ဖှဲ့ စညျးပုံအခွခေံဥပဒနေဲ့အညီ အကောငျးဆုံးဖွဈအောငျ ဆောငျရှတျစလေိုပါတယျ။ နုတျမိနျ့နဲ့ပိတျဆို့ထားတဲ့ အုပျခြုပျမှုတှေ လူတနျးသားခှဲခွားထားမှုတှေ မရှိစခေငျြ တော့ပါဘူး။ ကြှနျတျောတို့ မြှျောလငျ့ပါတယျ။
မေး။ ။လူနညျးစုတှအေနနေဲ့ မိမိတို့ လူ့ အစုအဝေးကိုကိုယျစားပွုတဲ့ ပါတီတှေ ဒါမှမဟုတျ တဈသီးပုဂ်ဂလ လှတျတျောကိုယျစားလှယျတှကေို လာမယျ့ရှေးကောကျပှဲတှငျ ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျ စလေိုပါသလား၊ ဘာ့ကွောငျ့ ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျ သငျ့မသငျ့ကို ပွောပေးပါ။
ဖွေ။ ။ပါတီစုံ ဒီမိုကရစေီစံနဈမှာ လူတဈယောကျ၊ လူအုပျစုလိုကျအစုအဖှဲ့အစညျး ကိုယျပိုငျ ဆုံးဖွတျခကျြတှေ ကို ကြှနျတျောတို့ တားပိုငျခှငျ့မရှိပါဘူး။ မညျသို့မှ မှတျခကျြမပေးပါဘူး။
ဖွေ။ ။၂ဝ၁၅ခုနှဈတှငျ ရှေးကောကျပှဲ အနိုငျရခဲ့တဲ့ အမြိုးသားဒီမိုကရစေီအဖှဲ့ခြုပျက ဦးဆောငျ တဲ့ အစိုးရအဖှဲ့ရဲ့ ဆောငျရှကျခကျြတှကေို အားရပါ သလားဆိုတာနဲ့ပတျသကျလို့ပွောရရငျတော့ အားရခွငျး၊ အားမရခွငျးဆိုတာထကျ အနိုငျရပါတီက ဦးဆောငျ ဖှဲ့စညျးထားတဲ့ လကျရှိအရပျသားအစိုးရအနနေဲ့ လူထု ရှေးခယျြတငျမွောကျလိုကျတဲ့ အရပျသားစဈစဈ အစိုးရတဈရပျအဖွဈရပျတညျပွီး စီမံအုပျခြုပျခှငျ့ ရနပွေီလား၊ အုပျခြုပျမှုအာဏာအပွညျ့အဝရှိတဲ့ အစိုးရ လားဆိုတာကို ပထမဆုံးထညျ့သှငျးစဉျးစားရမှာ ဖွဈတယျ။ အမြိုးသားဒီမိုကရစေီအဖှဲ့ခြုပျက ဦးဆောငျတဲ့ အစိုးရရဲ့ခံယူခကျြ၊ ရညျရှယျခကျြ၊ ဦးတညျခကျြတှေ အတိုငျးအုပျခြုပျနိုငျနပွေီလား။ အစိုးရအဖှဲ့ ဖျောဆောငျ လိုတဲ့အုပျခြုပျမှုပုံစံအတိုငျး ကငျြ့သုံးအုပျခြုပျနိုငျနပွေီ လား။ ရှေးကောကျပှဲကာလက ပေးထားတဲ့ ကတိကဝတျ တှအေတိုငျး စီမံပွီးလကျတှေ့ အကောငျအထညျဖျောနိုငျ နပွေီလား။ အစိုးရအဖှဲ့ရဲ့စိတျရငျးစတေနာအတိုငျး အကောငျ အထညျဖျောလြှောကျလှမျးနိုငျပွီလားဆိုတာကို ထညျ့သှငျးစဉျးစားပေးရမှာဖွဈတယျ။
ဖှဲ့စညျးပုံအကပျြအတညျးနဲ့ ခြုပျနှောငျထားမှုတှကေို မကြျောလှနျနိုငျသေးသရှတေ့ော့ လူထုမြှျောလငျ့ထားတဲ့ အတိုငျး အပွညျ့အဝ ကနြေပျအားရကွလိမျ့မယျ မဟုတျဘူးလို့တော့ မွငျပါတယျ။
ဖွေ။ ။အမြိုးသားဒီမိုကရစေီအဖှဲ့ခြုပျက ဦးဆောငျတဲ့အစိုးရအဖှဲ့ရဲ့ လကျအောကျမှာ နိုငျငံသား အခှငျ့အရေး၊ လူမြိုးရေးအခှငျ့အရေး၊ ဘာသာရေးအခှငျ့ အရေးတှတေနျးတူရရှိဖို့ဆိုတာ စဈမှနျတဲ့ဖကျဒရယျ ဒီမိုကရစေီစနဈကို အကောငျအထညျဖျောဆောငျရမယျ။ ပငျလုံစိတျဓာတျနဲ့ ပငျလုံကတိကဝတျတှကေို စိတျရငျး စတေနာမှနျနဲ့ လေးစားတနျဖိုးထားပွီးတော့ လူမြိုးကွီး ဝါဒအ၊ ခွမေခံဘဲ၊ ပွညျထောငျစုစနဈကိုအခွခေံပွီး တိုငျးပွညျကို ပွနျလညျတညျဆောကျရမယျ။ အဓိက အရေးကွီးဆုံးလုပျဖို့ လိုအပျတာကတော့ ဖကျဒရယျ ဒီမိုကရစေီစံနှုနျးတနျဘိုးတှနေဲ့ ကိုကျညီဆီလြျောတဲ့ ဖှဲ့စညျး ပုံဖွဈဖို့ လကျရှိဖှဲ့စညျးပုံကို လူထုဆန်ဒနဲ့အညီ ပွငျဆငျ၊ အသဈရေးဆှဲဖို့လိုအပျတယျ။
မေး။ ။မွနျမာနိုငျငံတှငျးမှာ မှီတငျး နထေိုငျကွတဲ့ လူနညျးစုမြားအခှငျ့အရေးအတှကျ ရှေးကောကျပှဲ ဝငျရောကျမယျ့ပါတီတှေ ဒါမှမဟုတျ နောကျတကျလာမယျ့အစိုးရထံကနေ ဘယျလို လုပျဆောငျပေးခကျြတှကေို လိုခငျြပါလဲ။
ဖွေ။ ။ ဒီမိုကရစေီလို့ဆိုလိုကျတာနဲ့ တရား မြှတခွငျး၊ တနျးတူညီမြှခွငျးဆိုတာ အနှဈသာရဖွဈတဲ့ အတှကျ လူနညျးစုတှရေဲ့အခှငျ့အရေးတို့၊ လူမြားစု အခှငျ့ အရေးတို့ ခှဲခွားပွီးဆကျဆံနတောကိုက ဒီမိုကရစေီ မဟုတျဘူးလို့မွငျပါတယျ။ ဒီမိုကရစေီဆိုတာ ဝါဒ၊ လမျး စဉျတဈခုလို့ပွောတာထကျ ကငျြ့စဉျတဈရပျလို့ပွောခငျြ တယျ။ ဒီမိုကရစေီကို အမှနျတကယျယုံကွညျလို့ တကျလာမယျ့ အစိုးရမှနျသမြှဒီမိုကရစေီကငျြ့စဉျတှကေို ကငျြ့ကွံအားထုတျလေးစားလိုကျနာမှသာ ကိုယျကြိုး စီးပှားကငျးပွီး အခှငျ့အရေးတနျးတူညီမြှမှာဖွဈတယျ။
ဖွေ ။ ။အာဏာရှငျစနဈအပွီးတိုငျ ခြုပျငွိမျး ပွီး စဈမှနျတဲ့ ဒီမိုကရစေီစနဈကို ပွောငျးလဲဖျောဆောငျ နတေဲ့အခြိနျမှာ ဖကျဒရယျဒီမိုကရစေီကို ဖျောဆောငျမယျ့ ဒီမိုကရကျတဈတှေ အစိုးရဖှဲ့နိုငျဖို့ စညျးစညျလုံးလုံး ညီညီညှတျညှတျနဲ့ပူးပေါငျးပွီး အငျနဲ့အားနဲ့ ဝိုငျးတှနျးပေး ကွဖို့ အရေးတကွီးလိုအပျတယျ။ တိုငျးရငျးသားပွညျနယျ တှမှောတော့ တိုငျးရငျးသားပါတီတှေ အားကောငျး မောငျးသနျ ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျအနိုငျရဖို့နဲ့ ဒီမိုကရကျ တဈတှနေဲ့ ပူးပေါငျးပွီး ဖကျဒရယျဒီမိုကရစေီကို ပံ့ပိုးနိုငျဖို့ အစိုးရအဖှဲ့မှာ ပါဝငျစခေငျြပါတယျ။
ဖွေ။ ။ နိုငျငံသားလူနညျးစုဘာသာဝငျ တဈဦးအမွငျအရပွောရရငျ ယခငျကထကျ အမုနျးတရား ဟောကွားမှုတှေ အကွမျးဖကျတိုကျခိုကျမှုတှေ စိုးတထငျ့ ထငျ့နဲ့သှားလာ လှုပျရှားနရေတာတှေ အမြားကွီးလြော့ နညျးသှားပါတယျ၊ ပိုလုံခွုံမှုရလာတယျလို့ ခံစားမိပါတယျ၊ ရာနှုနျးပွညျ့ အားရပါးရဖွဈရတယျဆိုတဲ့ အစိုးရမြိုးကို ဘယျနိုငျငံရဲ့ နိုငျငံသားကမြှမရသေးပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ ပိုမိုအားရစရာကောငျးတဲ့ အခွအေနတှေဆေကျဖွဈလာ ဖို့ကိုတော့ မြှျောလငျ့ပါတယျ။ လကျရှိဖွဈပျေါတိုးတကျ မှုတှေ ကိုလညျး အသိအမှတျပွုပါတယျ။ အတိုငျးအတာ တဈခုထိကို အားရပါတယျ။
ဖွေ။ ။ ဖှဲ့စညျးပုံအခွခေံဥပဒအေရ ကြှနျတျောတို့ရဲ့ ညီအဈကိုတျောအမြားစုကိုးကှယျတဲ့ ဗုဒ်ဓဘာသာကဝိသသေဂုဏျထူးနဲ့ ပွညျ့စုံတဲ့ဘာသာလို့ ပွဋ်ဌာနျးထားပါတယျ။ အလားတူ ကနျြနိုငျငံသားတှေ ကိုးကှယျတဲ့ခရဈယာနျ၊ဟိန်ဒူ၊ အစ်စလာမျဘာသာတို့ကို လညျး အသိအမှတျပွုတယျလို့ ဖျောပွပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ကနျြဘာသာတှကေအမြားစုကိုးကှယျတဲ့ ဘာသာတရားနဲ့ ထပျတူ ညီမြှတနျးတူဖွဈဖို့ မလှယျပါဘူး။ ဒါကွောငျ့ အခုအစိုးရရယျမှမဟုတျပါဘူး။ ဘယျအစိုးရတကျတကျ အမြားစုကိုးကှယျရာနဲ့ လူနညျးစုကိုးကှယျရာတို့တှကေ ထပျတူဖွဈလာဖို့မလှယျပါဘူး။ အခွခေံဥပဒမှော ဖျောပွ ထားတာကွောငျ့မို့လိုယူဆပါတယျ။ လကျတလော ပွငျ ဆငျခကျြတှမှောလညျး ပွငျဆငျရေးအပိုငျးမှ မပါပါဘူး။ ဒီပွဌာနျးခကျြက ဆကျလကျတညျရှိနအေုံးမှပါ။ တဖကျ မှာလညျးနိုငျငံတျောအသိအမှတျပွု ဘာသာသာသနာတှေ ကို သူ့အတိုငျး အတာနဲ့ သူအခှငျ့အရေးပေးစလေိုတာမြိုး လိုအပျပါတယျ။ ဟာဂျြခရီးစဉျ ဟလလျစားသောကျကုနျ စတာတှေ ပိုမိုခြောမှအေ့ောငျ လူနညျးစုဘာသာဝငျတှေ ပိုအဆငျပွအေောငျ အုပျခြုပျရေးနညျးလမျး ဥပဒပွေုရေး နညျးလမျးတှနေဲ့ ကူညီစောငျ့ရှောကျပေးစလေိုပါတယျ။ နိုငျငံသားအခှငျ့အရေးရရှိရေးကို ဘာသာကိုး ကှယျမှုကို အကွောငျးခံပွီးခှဲခွားတာမြိုး ကနျ့သတျတာမြိုး မရှိစဖေို့ ပိုအားထုတျစလေိုပါတယျ။ နိုငျငံသား လူနညျးစုဘာသာ ဝငျတှေ အကွားအမိနိုငျငံတျောကို ခဈြခငျစိတျ သစ်စာ စောငျ့သိရိုသစေိတျတှပေိုအားကောငျးလာအောငျ လူနညျး စုဘာသာဝငျတှရေဲ့ အခကျအခဲတှပေိုမို သိရှိလာစဖေို့ အုပျခြုပျရေးဘကျကပှငျ့လငျးမွငျသာမှုရှိရှိနဲ့ ထိတှေ့ ဆကျဆံရေးတှမြေားမြား လုပျပေးစလေိုပါတယျ။
ဖွေ။ ။နိုငျငံသားဖွဈခွငျးသညျသာပဓာနဆိုတဲ့မူဝါဒ အား ကောငျးလာစဖေို့ မွပွေငျထိရောကျအောငျ လူအမြာစုဆီ ပွနျ့နှံ့အောငျ လကျရှိအစိုးရအနနေဲ့ ရောနောကျနောငျ တကျလာမယျအစိုးရအနနေဲ့ပါ ကွိုးစားပေးစလေိုပါတယျ။ လူမြိုးရေးဘာသာရေး နိုငျငံရေးဝါဒတှေ စုံလငျကှဲပွား ရာကနေ ပကျကွားအကျနတေဲ့ လယျကှငျးအိုလိုနိုငျငံကို မဖွဈစခေငျြပါဘူး။ ဒီအကှဲအဟတှကေို တဈသားတညျး ဖွဈစအေောငျ လုပျနိုငျတာကနိုငျငံသားဖွဈခွငျးသာ ပဓာနဆိုတဲ့ မူဝါဒလိုမွငျပါတယျ။ ဘယျပါတီမဆို နိုငျငံ သားသာပဓာနဆိုတဲ့မူကို ဆှဲကိုငျစလေိုပါတယျ။အမှနျ တကယျ အကောငျအထညျဖျောခဲ့လိုရှိရငျ ကနျြလို အပျနတေဲ့ အကနျ့အသတျခံရတဲ့ နိုငျငံသားအခှငျ့အရေး တှရေသှားမယျလို ယူဆပါတယျ။
ဖွေ။ ။အထကျကဆိုခဲ့သလို နိုငျငံသား ဖွဈခွငျးသာပဓာနဆိုတာ ပါတီတှအေုပျခြုပျသူတှေ အတှကျတငျ မဟုတျပါဘူး၊ ပွညျသူတှေ အကွားမှာပါ လိုအပျတဲ့တဈခုတညျးသော Identity ပဲဖွဈပါတယျ။ မတူတဲ့ဝိသသေလက်ခဏာကို ရှတေ့နျးဖို့ ဗိုလျခြုပျအောငျ ဆနျးတို့ ဆရာကွီး ဦးရာဇာတျတို့လို ကြှနျတျောတို့ရဲ့ အမြိုးသားခေါငျးဆောငျကွီးတှေ လမျးမပွခဲ့ကွပါဘူး။ ကှဲပွားနမှေုကို ဘေးဖယျပွီးဘုံ တူညီတဲ့ဝိသနေကို ပျေါလှငျစဖေို့ပဲမိနျ့ကွားခဲ့ပါတယျ။ အုပျခြုပျသူတှေ အတှကျရော ပွညျသူတှအေတှကျပါ ဘယျလိုနထေိုငျရပျ တညျရမလဲဆိုတာ အမြိုးသားခေါငျးဆောငျကွီးတှေ ခမြှတျခဲ့ပွီးသားပါ။ ဒီလမျးစဉျကိုပဲ ယုံယုံကွညျကွညျ အကောငျအထညျဖျောပေးဖို့ လကျခံကငျြ့သုံးဖို့ပဲလိုပါတယျ။ မေးခှနျးကိုဖွရေရငျ မတူကှဲပွားတဲ့ ဝိသသေတှကေို အားပေးမွငျ့တငျပေးမယျ့ နိုငျငံရေးပါတီတှထေကျ တဈသားတညျးဖွဈခငျြးကိုအားပေးတဲ့ နိုငျငံသား အခှငျ့ အရေးကို အာမခံတဲ့ပါတီကို အားပေးသငျ့ပါတယျ။ လူနညျးစုမို့လို လူနညျးစုအရေးလုပျမို့ ရှေးကောကျပှဲ ဝငျပွိုငျတာထကျ မွနျမာနိုငျငံသားမို့လို နိုငျငံ့အရေး လုပျမို့ရှေးကောကျပှဲ ဝငျပွိုငျကွတာမြိုးပဲလိုလား ပါတယျ။အကှဲအဟတှေ အမြားကွီးအကွားမှာကိုယျ ကိုယျတိုငျက အကှဲအဟတဈခု မဖွဈစခေငျြပါဘူး။
ဖွေ။ ။ဒီခြုပျကိုပဲမဲပေးပါမယျ။လူနညျးစု အခှငျ့အရေးကို လေးစားရနျ အသိပေးတိုကျတှနျး တောငျးဆိုသှားမယျ။
ဖွေ။ ။ အတိုငျးအတာတဈခုထိ ရရှိသညျဟု ခံစားရပါတယျ။ တနျးတူညီမြှမှုပျေါအခွခေံသော စဈမှနျသညျ့ ဖယျဒရယျ နိုငျငံအဖွဈရပျတညျနလေိုပါ တယျ။
ဖွေ။ ။လူအခှငျ့အရေး အပွညျ့အဝခံစား လိုပါတယျ။ နိုငျငံသားအခှငျ့အရေးလညျး အပွညျ့အဝ နှငျ့ ရပျတညျလိုပါတယျ။ လဈဘရယျဒီမိုက ရစေီမူပျေါ တှငျပွတျသားစှာရပျတညျစလေိုပါတယျ။
ဖွေ။ ။လူနညျးစုအတှကျပါတီရှိရပါမယျ။ ရှေးကောကျပှဲတှငျလညျးပါဝငျစခေငျြပါတယျ။ အနိုငျရ နိုငျတဲ့ပါတီနှငျ့ပူးပေါငျးဆောငျရှကျစလေိုပါတယျ။
ဦးကြျောစှာ (မွနျမာမှတျစလငျအစညျးအရုံး – BMA)
ဖွေ။ ။လုံးဝ အားမရပါ။
ဖွေ။ ။ တနျးတူအခှငျ့အရေးမြား မရရှိပါ။ အဘယျကွောငျ့ဆိုသျော လူနညျးစုဘာသာဝငျမြား အထူး သဖွငျ့ အစ်စလာမျဘာသာဝငျမြားနှငျ့ပတျသကျသော လုပျထုံးလုပျနညျးမြားကို နရောအတျောမြားမြားတှငျ ယခငျမူအတိုငျး ဆကျလကျကငျြ့သုံးနသေညျ့အပွငျ အခြို့နရောမြားတှငျ ပိုမိုတငျးကွပျခဲ့သညျမြားပငျ ရှိခဲ့ ပါသညျ။
ဖွေ။ ။လူမြိုးဘာသာ ခှဲခွားမှုမရှိဘဲ အခွား ဘာသာဝငျမြားနညျးတူ စဈမှနျတဲ့ဒီမိုကရစေီနဲ့ လူ့ အခှငျ့အရေးကို လေးစားလိုကျနာပွီး နိုငျငံသား တိုငျးတနျး တူအခှငျ့အရေးကို ဦးစားပေးသငျ့ပါတယျ။
ဖွေ။ ။လူနညျးစုမြားအနဖွေငျ့ မိမိတို့ အစုအဝေးမှ အရညျအခငျြးပွညျ့ဝသူမြားကို လာမညျ့ ရှေးကောကျပှဲ၌ ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျစလေိုပါတယျ။ ဒီမိုကရစေီအခှငျ့အရေး မိမိတို့ရဲ့နိုငျငံသား အခှငျ့ အရေးကို ကငျြ့သုံးခွငျးဖွဈပါတယျ။ မိမိတို့အစုအဝေးရဲ့ လိုအပျခကျြ အခကျအခဲမြားကို မိမိတို့ကသာ အသိနိုငျ ဆုံးဖွဈပါတယျ။ လှတျတျောတှငျးမှာ မိမိတို့အစုအဝေးရဲ့ လိုအပျခကျြမြားကို တငျပွတောငျးဆိုနိုငျရနျဖွဈပါတယျ။◾
၂ဝ၂ဝရွေးကောက်ပွဲနှင့် မြန်မာမွတ်စလင် လူ့အဖွဲ့အစည်း၏ အခန်းကဏ္ဍ
ပြည်သူအများစုတင်မြှောက်ထားသည့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကဦးဆောင်တဲ့ အစိုးရသက်တမ်းသည် မကြာမီကာလတွင် ၅နှစ်ပြည့်မြောက်ပြီဖြစ်၍ ရွေးကောက်ပွဲများပြန်လည်ကျင်းပပြုလုပ်ရတော့မည့်အချိန်သို့ ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါသည်။ ပြီးခဲ့သည့် ၂ဝ၁၅ခုနှစ်က ကျင်းပပြုလုပ်သည့်ရွေးကောက်ပွဲတွင် နိုင်ငံသားအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များသည် လူအများစုတို့နှင့် တစ်ထပ်တည်းရပ်တည်ကာ ဒီချုပ်ပါတီကို သောင်ပြိုကမ်းပြို အနိုင်ရအောင်မဲပေးသည့်အထဲတွင် တစ်ထောင့်တစ်နေရာ ကနေပါဝင်ခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့မဲပေးခဲ့ရခြင်းမှာလည်း ယခင်စစ်အစိုးရလက်ထက်များနှင့် အရပ်သားအစိုးရဟု အမည်တပ်ထားသည့် အစိုးရဟောင်းလက်ထက်များတွင် နိုင်ငံသားအချင်းချင်းခွဲခြား ဆက်ဆံမှုများ၊ တိုင်းရင်းသား အချင်းချင်းခွဲခြားဆက်ဆံခံရမှုများ၊ ဘာသာရေးလူမျိုးရေးခွဲခြားဆက်ဆံခံရမှုများမှ လွတ်မြောက်စေရန် မျှော်လင့်ရည်သန်ပြီး ဒီချုပ်အစိုးရကို မဲပေး၍တွန်းတင်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါသည်။ သို့သော်အာဏာရဒီချုပ်ပါတီ၏ဦးဆောင်မှုဖြင့်အုပ်ချုပ်သည့် အစိုးရသက်တမ်း ၅နှစ်တာကာလတွင် ထိုကဲ့သို့ ခွဲခြားဆက်ဆံမှုများမှာ ဆက်လက်တည်ရှိနေလျက်ပင်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် လာမည့် ရွေးကောက်ပွဲတွင် မြန်မာနိုင်ငံသားအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များအနေဖြင့် မိမိတို့၏နိုင်ငံသား အခွင့်အရေးများ ပြည့်ပြည့်ဝဝရရှိရန်အတွက် ဒီချုပ်အစိုးရကိုပဲ မဲဆက်ပေးမည်လား၊ သို့တည်းမဟုတ် မည်သည့်လမ်းကြောင်းဖြင့် သွားကြမည်လဲဆိုသည်ကို သိရှိလိုပါသဖြင့် Friday Times Journal ကနေ၍ မြန်မာနိုင်ငံသားအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များ၏ သဘောထား အမြင်များကောက်ခံပြီး အပတ်စဉ်စုစည်းဖော်ပြပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
မေး။ ။၂ဝ၁၅ခုနှစ်တွင် ရွေးကောက်ပွဲ အနိုင်ရခဲ့သည့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က ဦးဆောင်သည့် အစိုးရအဖွဲ့၏ ဆောင်ရွက်ချက်များကို အားရပါသလား။
ဖြေ။ ။ကျွန်တော့်အဖြေကို မွတ်စလင် အများစုကကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူး၊ စိတ်အနှောင့်အယှက် ဖြစ်မှာတောင် စိုးရိမ်ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အရှိအမြင် အတိုင်းပဲဖြေမှာပါ။
အစိုးရရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေထဲမှာ ကြိုက်တာ ရှိသလို၊ မကြိုက်တာလည်းရှိပါတယ်။
NVကတ်ဆက်ပြီးထုတ်ပေးနေတာ၊ မွတ်စလင်တွေ နဲ့ ထိတွေ့ဆက်ဆံမှု အားနည်းတာတွေကိုမကြိုက်ဘူး။
ရခိုင်နဲ့ လူနည်းစုပြဿနာတွေအပေါ် ကိုင်တွယ် ဖြေရှင်းတာတွေမှာ အားနည်းချက်လိုအပ်ချက်အများ ကြီး ရှိနေပါသေးတယ်။
ဒါပေမဲ့လည်း ပြောင်းလဲသင့်တာ အားလုံးကို ဒီသက်တမ်း(၅)နှစ်လောက်နဲ့ ပြောင်းလဲဖို့ဆိုတာ လက် တွေ့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ အမေရိကန်သမ္မတတွေကို လာ လုပ်ခိုင်းတောင် မရနိုင်ပါဘူး။ ကြိုက်တာ တွေကတော့ အမုန်းစကားပြောဆိုနေတာ ရပ်တန့်ဖို့၊ အကြမ်းဖက်မှု တွေကို ထပ်တိုးမလာ ဖို့ဆောင်ရွက်တာတွေ၊ ပြဿနာ ဖန်တီးသူတွေကို အားမပေးတာ၊ အရေးယူတာတွေကို ကြိုက်ပါတယ်။
အရင်အစိုးရတွေတုန်းက ဒါတွေကိုမဟန့်တားရုံမက အားပေးထောက်ပံ့မှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်၊ အမုန်းစကားပြောတာတွေ၊ ပိုစတာတွေကိုင်ပြီးတော့ လူအများမြင်ကွင်းမှာ အစ္စလာမ်ဘာသာကို စော်ကားတာတွေ နေ့စဉ် ရက်ဆက် လုပ်ခဲ့ကြတယ်၊ မွတ်စလင်တွေအပေါ် ပေါ်ပေါ်ထင် အကြမ်းဖက်တာတွေကို ဟန့်တာအရေး ယူဖို့ ပျက်ကွက်တာတွေရှိခဲ့တယ်။
ဒါ့ထက်ဆိုးတာကတရားခံတွေကိုအားပေးထောက်ပံ့ တာတွေကိုပါ လုပ်ခဲ့ကြတယ်။ ဘယ်လောက်အထိ ဆိုး လည်းဆို နိုင်ငံတော်က အသိအမှတ်ပြုထားတဲ့ ဘာသာ ကြီးတစ်ခုကို ”သားဖေါက်နှုန်းမြန်…တိရစ္ဆာန်ဝါဒ ဆန့်ကျင်ကြ” ဆိုတဲ့ ပိုစတာများနဲ့ အခြားစော်ကားမှုမျိုးစုံ ပါတဲ့ပိုစတာတွေကိုင်ပြီး စော်ကားတာတွေ၊ စာအုပ် စာစောင်များထုတ်ပြီးစော်ကား လှုံ့ဆော်တာတွေကို ဟန့်တားအရေးယူ မှုတွေမလုပ်ခဲ့ဘူး။
မိတ္ထီလာနဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်အပါအဝင် နေရာအတော် များများမှာ လူနည်းစုတွေကို အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက် တာတွေ၊ ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်သတ်ဖြတ်တာတွေ မီးရှို့တာ တွေကိုလုံလောက်တဲ့ဟန့်တားအရေးယူမှုတွေ မလုပ်ခဲ့ဘူး။ မိတ္ထီလာမှာဆိုရင် မွတ်စလင် လူနည်းစုတွေရဲ့ အိမ်တွေ၊ ဆိုင်တွေကို လုယက်မီးရှို့ဖျက်ဆီးတာတွေ အပြီးသိမ်းယူ လိုက်တာတွေ၊ သာသနိကအဆောက်အအုံတွေကို မီးရှို့ဖျက်ဆီးတာကိုမဟန့်တားတဲ့အပြင် ဘာသာရေး အဆောက်အအုံတွေကိုပါ ပိတ်ပစ်ခဲ့တာတွေကို အစိုးရ ကိုယ်တိုင်ကျူးလွန်ခဲ့ကြတယ်။
”မွတ်စလင်တွေကို ခေါင်းမဖော်ဝံ့အောင်လုပ်ရ မယ်။ ရခိုင်ဒေသကို အစ္စရေးတွေက ပါလက်စတိုင်း တွေကို လုပ်သလိုလုပ်ပစ်ရမယ်” စတဲ့ အမုန်းတရား လှုံ့ဆော်ဖန်တီးသူတွေကို အရေးယူတာ တွေမလုပ်တဲ့အပြင် အားပေးချီးမြှောက်မှုတွေပါလုပ်ခဲ့ကြတယ်။
အခုအစိုးရက ဒါတွေမလုပ်တဲ့အပြင် အရေးယူခဲ့ တာတွေတောင် ရှိခဲ့တယ်။ အတိုချုံ့ပြောရရင် အရင်အစိုးရက ဘာသာရေးမုန်း တီးရေးလှုံ့ဆော်သူတွေ အကြမ်းဖက်သူတွေကို အားပေးခဲ့ တယ် ဘာသာရေးကို နိုင်ငံရေးအာဏာအရေးအတွက် အသုံးချခဲ့တယ်။
အခုအစိုးရက ဒါတွေမလုပ်ဘူး။ဒါကိုအသိအမှတ် မပြုပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့မလုံလောက်သေးဖူး။ ဒီထက်ပို လုပ်ဖို့လို ပါသေးတယ်။
မေး။ ။အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ လက်အောက်မှာနိုင်ငံ သားအခွင့်အရေးတွေ၊ လူမျိုးရေးအခွင့်အရေးတွေ၊ ဘာသာရေးအခွင့်အရေးတွေ တန်းတူရရှိတယ်လို့ ခံစားရပါသလား။ မရရှိဘူလို့ဆိုရင် ဘာကြောင့်လို့ ထင်ပါသလဲ။
ဖြေ ။ ။ မရရှိသေးပါဘူး၊ အထက်မှာပြောခဲ့သလို အများကြီးလိုပါသေးတယ်။ အကြောင်းတရားက အစိုးရရဲ့ စွမ်းဆောင်မှုအား နည်းတာတွေ၊ ဘာသာရေးကို အာဏာအရေးအတွက်အသုံးချသူတွေရဲ့ အန္တရာယ်နဲ့ ဖိအားတွေ ကြီးမားစွာရှိနေတာတွေ၊ စစ်ဘက်နဲ့ အာဏာခွဲဝေးယူထားရပြီး ပြည့်ဝတဲ့ အာဏာဆက်မရှိတာတွေကြောင့်လို့ ထင်ပါတယ်။
မေး။ ။မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာ မှီတင်း နေထိုင်ကြတဲ့ လူနည်းစုများအခွင့်အရေးအတွက် ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်ရောက်မယ့်ပါတီတွေ ဒါမှမဟုတ် နောက်တက်လာမယ့်အစိုးရထံကနေ ဘယ်လိုလုပ် ဆောင်ပေးချက်တွေကို လိုချင်ပါလဲ။
ဖြေ။ ။ရိုဟင်ဂျာပြဿနာကို ကာယကံရှင်ခေါင်းဆောင် တွေညှိနှိုင်းပြီး နိုင်ငံတကာနဲ့ ပူးပေါင်းဖြေရှင်း ဆောင်ရွက် စေချင်တယ်။
မွတ်စလင်လူနည်းစုတွေကို နိုင်ငံရေးအပါအဝင် ကဏ္ဍပေါင်းစုံက ဖယ်ကြဉ်နေတာတွေ၊ ခွဲခြားဆက်ဆံ နေတာကို ရပ်တန့်အောင်လုပ်ရမယ်။ ဘာသာလူမျိုး အပေါ်အခြေမခံဘဲ အရည်အချင်းအလိုက် ပါဝင်ခွင့်ပြု စေချင်တယ်။
အမုန်းတရားလှုံ့ဆော်ဖန်တီးသူတွေကို ဆက်ပြီး ပြတ်ပြတ်သားသား အရေးယူတားဆီး ပေးသင့်တယ်။
ဘာသာရေးအဆောက်အအုံတွေပိတ်သိမ်းထားတာ တွေကိုပြန်လည် ဖွင့်လှစ်ခွင့်၊ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်၊ ပြုပြင်ခွင့်၊ တည်ဆောက်ခွင့်တွေနဲ့ နိုင်ငံသား စိစစ်ရေးလုပ်ငန်းတွေ ကို တန်းတူစစ်ဆေး ထုတ်ပေးခြင်းများ အပါအဝင် နိုင်ငံ သားချင်း တန်းတူညီမျှဖြစ်ဖို့၊ ခွဲခြားမှုပပျောက်ဖို့ မဖြစ် မနေအားစိုက်ဆောင်ရွက်စေချင်တယ်။
မေး။ ။လူနည်းစုတွေအနေနဲ့ မိမိတို့ လူ့ အစုအဝေးကိုကိုယ်စားပြုတဲ့ ပါတီတွေ ဒါမှမဟုတ် တစ်သီးပုဂ္ဂလ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကို လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲတွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင် စေလိုပါသလား၊ ဘာကြောင့် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင် သင့်၊ မသင့်ကို ပြောပေးပါ။
ဖြေ ။ ။ နိုင်ငံရေးပါတီများရော အရပ်ဘက် အဖွဲ့အစည်းများ အားကောင်းလာအောင်လုပ်သင့်သလို လူနည်းစုပါတီနဲ့ အာဏာရပါတီကပါ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဖြစ်အောင်ကြိုးစားသင့်တယ်။ အထူးသဖြင့် လူထုထောက်ခံမှု အများဆုံးပါတီကနေ ဝင်ရောက် အရွေးခံနိုင်အောင် ကြိုးစားသင့်တယ်။ သက်ဆိုင်ရာပါတီက လက်ခံလာအောင် နိုင်ငံရေးသမား ကာယကံရှင်တွေ ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားရမယ်။ ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာ ပါတီဘက် ကလည်း လက်ခံမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ကိုမြအေး၊ ဒေါ်ဝင်း မြမြ၊ ကိုကြည်လင်၊ ကိုထွန်းကြည်၊ ကိုစည်သူမောင်တို့ ကြိုးစားကြမယ် ဆိုရင်ရနိုင်ပါတယ်။ ပါတီက လက်မခံ ခဲ့ရင်တော့ အချို့ပုဂ္ဂိုလ်များ တစ်သီးပုဂ္ဂလဝင်ပြိုင်သင့် ပါတယ်။ ဥပမာ- ကိုမြအေးပါတီက လက်သင့်မခံရင် ပန်းဘဲတန်းက တစ်သီးပုဂ္ဂအနေနဲ့ ဝင်ပြိုင်သင့်ပါတယ်။ အများလက်ခံတဲ့ အခြားပုဂ္ဂိုလ်များလည်း အခြားအမာခံ မဲဆန္ဒနယ်မြေရှိရင် တစ်သီးပုဂ္ဂလ ဝင်ပြိုင်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အများလက်ခံနိုင်ခြေရှိတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယ်တိုင် ကြိုးစားကြဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ ဟိုလူ့လွှဲချ၊ ဒီလူ့လွှဲချ မလုပ်ဘဲ ကိုယ်တိုင်ဝင်အရွေးခံမှသာ လက်တွေ့အောင် မြင်နိုင်မှာပါ။ နိုင်ငံရေးသြဇာမရှိတဲ့ လူတစ်ရာအတွက် ကြိုးစားတာထက် နိုင်ငံရေးသြဇာရှိတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်အချို့ အတွက်သာ အားစိုက်ပြီး ကျစ်ကျစ်လျစ်လျစ် ဆောင်ရွက် ရင် အဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်။
( ကုရ်အာန်အသိပညာပြန့်ပွားရေးအဖွဲ့- SEQK )
မေး။ ။၂ဝ၁၅ခုနှစ်တွင် ရွေးကောက်ပွဲ အနိုင်ရခဲ့သည့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က ဦးဆောင်သည့် အစိုးရအဖွဲ့၏ ဆောင်ရွက်ချက်များ ကို အားရပါသလား။
ဖြေ။ ။မေးခွန်းတွေမဖြေဆိုခင် ပဏာမ ဆွေးနွေးလိုတဲ့အချက်တွေက . . .
(၁၉၉ဝ)ရွေးကောက်ပွဲတွင်လည်းကောင်း၊ (၂ဝ၁၅) ရွေးကောက်ပွဲတွင်လည်းကောင်း မြန်မာမွတ်စလင် လူနည်းစု (Religious bused minority community) က NLDပါတီကို အုတ်အော်သောင်းတင်း မဲပေးခဲ့ပါတယ်။ နိုင်ငံရေးအခြေအနေအရ အဲဒီကာလနှစ်ခုမှာ NLDပါတီကို မဲပေးခဲ့ခြင်းသည် လုံးဝမှားယွင်းမှု မရှိပါဘူး။ လိုအပ်ချက်အရ မဲပေးခဲ့ခြင်းသာဖြစ်တယ်။ သို့သော် လာမယ့်(၂ဝ၂ဝ)ပြည့်နှစ်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာ NLDပါတီအနေနဲ့ဖြစ်စေ၊ အခြားမည်သည့်ပါတီဖြစ်စေ မွတ်စလင်တို့ရဲ့မဲပြားကိုလိုချင်ရင် အောက်ပါမေးခွန်း (၂) ချက်ကိုတော့ အဖြေပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့ ယူဆမိပါတယ်။
(၁)မြန်မာနိုင်ငံသားမွတ်စလင်တို့၏ နိုင်ငံသား (Citizenship) ဖြစ်ခွင့်နှင့်ပတ်သက်၍ အဟန့်အတားဖြစ် နေခြင်း၊ အချိန်ဆွဲလေးဖင့်နေခြင်းစတဲ့ အကန့်အသတ် များကို မည်ကဲ့သို့ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးမလဲ။
(၂) အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်နိုင်ငံသားများ ဘာသာ ရေးယုံကြည်ချက်ကြောင့် ခွဲခြားဆက်ဆံခံနေရခြင်း (Discrimination on the busis of Religious belief) ကို မည်ကဲ့သို့အာမခံချက်ပေးပြီး ကုစားဖြေရှင်းပေးမှာလဲ ဆိုတာပါ။
အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် မွတ်စလင်တို့အနေနဲ့ လာမယ့်(၂ဝ၂ဝ) အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင် ယခင် ရွေးကောက်ပွဲများမှာထက် မိမိတို့၏မဲပြားကို မိမိတို့ကိုယ် တိုင် ပိုမိုတန်ဖိုးထားလာကြမည်ဖြစ်သလို တစ်ဖက်က မဲရယူလိုက်မယ့်ပါတီ (သိုမဟုတ်) တစ်သီးပုဂ္ဂလအမတ် လောင်းများကလည်း မိမိတို့၏မဲပြားအပေါ် တန်ဖိုးထား လာစေချင်နေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိအနေအထားမှာ (၂ဝ၂ဝ)ရွေးကောက်ပွဲတွင် အစ္စလာမ်ဘာသာရေးဆိုင်ရာ လူနည်းစုတွေက ပြီးခဲ့တဲ့ နိုင်ငံရေးသက်တမ်းရဲ့အတွေ့ အကြုံတွေအရ ယုံယုံကြည်ကြည်မဲပေးဖို့ အားနည်းလျက် ရှိပါတယ်။
(၂ဝ၁၅) ခုနှစ်တွင် ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရခဲ့သော NLDဦးဆောင်သည့် အစိုးရအဖွဲ့၏ ဆောင်ရွက်ချက် များသည် တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာအရ အားရကျေနပ် မှုမရှိခဲ့ကြပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် မိမိတို့ကိုရွေး ကောက်ပွဲမတိုင်မီကပေးထားသော ကတိကဝတ်ဖြစ်သည့် (၂ဝဝ၈) ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြင်ဆင်ရန် မစွမ်း ဆောင်နိုင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ တစ်ဖက်ကလည်း စီးပွား ရေးအကျပ်အတည်းများကြောင့် ပြည်သူတို့၏ စားဝတ် နေရေးကိုထိခိုက်လာရမှုများရှိနေတယ်။
မေး။ ။အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ လက်အောက်မှာ နိုင်ငံ သားအခွင့်အရေးတွေ၊ လူမျိုးရေးအခွင့်အရေးတွေ၊ ဘာသာရေးအခွင့်အရေးတွေ တန်းတူရရှိတယ်လို့ ခံစားရပါသလား။ မရရှိဘူးလို့ဆိုရင် ဘာကြောင့်လို့ ထင်ပါသလဲ။
ဖြေ။ ။NLDပါတီအစိုးရအဖွဲ့၏ လက် အောက်တွင် နိုင်ငံသားအခွင့်အရေး၊ လူမျိုးရေးဆိုင်ရာ အခွင့်အရေး၊ ဘာသာရေးဆိုင်ရာအခွင့်အရေးများ တန်းတူရည်တူမရရှိဘူးလို့ ခံစားမိပါတယ်။
အဲဒီလိုမရရှိခြင်းက NLDပါတီအနေနဲ့ အရင် အစိုးရများထက်ပင် အထူးသဖြင့်မွတ်စလင်လူ့အစုအဖွဲ့နဲ့ ထိတွေ့မှုနည်းခြင်း၊ မွတ်စလင်လူ့အဖွဲ့ အစည်းနှင့် နီးနီး ကပ်ကပ်ဆက်ဆံမယ်ဆိုရင် တစ်ဖက်က အစွန်းရောက် အမျိုးသားရေးဝါဒီ (Radical nationalist)များရဲ့ အထင် လွဲစွပ်စွဲမှုများ ခံရမည် ကိုစိုးရိမ်ခြင်း၊ ဒီမိုကရေစီရဲ့ အခြေခံ အုတ်မြစ်ဖြစ်တဲ့ Pluralism (မတူစုံလင်ကွဲပြားသော ပဒေသာစုံယဉ်ကျေးမှု) စနစ်ကို အလေးမပေးတဲ့အပေါ် လွှတ်တော်အတွင်းမှာ မွတ်စလင် အမတ်မရှိခြင်း၊ ဟိန္ဒူ ဘာသာဝင်လွှတ်တော် အမတ်မရှိခြင်း၊ လွှတ်တော်အတွင်း လူနည်းစု ဘာသာဝင်တို့ရဲ့ အရေးကိစ္စဆွေးနွေးမှု တွေ အသံတိတ်ပျောက်ကွယ်နေခြင်းက ရလဒ်တွေပဲဖြစ် ပါတယ်။
မေး။ ။မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာ မှီတင်း နေထိုင်ကြတဲ့ လူနည်းစုများအခွင့်အရေးအတွက် ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရောက်မယ့်ပါတီတွေ ဒါမှမဟုတ် နောက်တက်လာမယ့်အစိုးရထံကနေ ဘယ်လို လုပ်ဆောင်ပေးချက်တွေကို လိုချင်ပါလဲ။
ဖြေ။ ။မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှီတင်းနေထိုင် ကြတဲ့ လူနည်းစုအခွင့်အရေးအတွက် ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်ရောက်မယ့်ပါတီ တွေဖြစ်ဖြစ်၊ နောင်တက်လာမယ့် အစိုးရအဖွဲ့ဖြစ်ဖြစ်၊ မိမိကိုမဲပေးလိုက်တဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့ နိုင်ငံသားဖြစ်မှု (Citizenship)နဲ့ ဘာသာရေး ယုံကြည်ချက်ကြောင့် ခွဲခြား ဆက်ဆံခံနေရတာတွေ (Discrimination on the basis of Religious belief)ကို အာမခံချက်ပေးပြီး ကုစား ဖြေရှင်းပေးစေလိုပါတယ်။
မေး။ ။လူနည်းစုတွေအနေနဲ့ မိမိတို့ လူ့အစုအဝေးကိုကိုယ်စားပြုတဲ့ ပါတီတွေ ဒါမှ မဟုတ် တစ်သီးပုဂ္ဂလ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် တွေကို လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲတွင် ဝင်ရောက်ယှဉ် ပြိုင်စေလိုပါသလား၊ ဘာကြောင့် ဝင်ရောက်ယှဉ် ပြိုင်သင့်၊ မသင့်ကို ပြောပေးပါ။
ဖြေ။ ။လူနည်းစုတိုင်းရင်းသားတွေ၊ ဘာသာ ရေးဆိုင်ရာလူနည်းစုများအနေနဲ့ မိမိတို့လူ့အစုအဖွဲ့ကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ပါတီတွေ၊ တစ်သီးပုဂ္ဂလလွှတ်တော်ကိုယ် စားလှယ်တွေအနေနဲ့ လာမယ့်၂ဝ၂ဝအထွေထွေရွေး ကောက်ပွဲတွင် ဝင်ရောက်အရွေးခံခြင်းကိုအပြုသဘော အဖြစ်လက်ခံအားပေးပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ သက်တမ်းတစ်လျှောက်မှာ အထူးသဖြင့်ဘာသာရေး ယုံကြည်ချက်ဆိုင်ရာလူနည်းစုတို့ရဲ့ အရေးကိစ္စတွေကို သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတို့က အရေးတယူဆွေးနွေးခြင်း၊ ထင်သာမြင်သာရှိစွာ ဆောင်ရွက် ပေးခြင်းများက မတွေ့ရ သလောက်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် လွှတ်တော်အတွင်း မိမိအစုအဖွဲ့ရဲ့အရေးကိစ္စကို မိမိတို့ကိုယ်တိုင် တောင်းဆို ဆွေးနွေးဖြေရှင်းခြင်းကသာ အကောင်းဆုံးပင်ဖြစ်မယ် လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။
ဖြေ။ ။အားရပါတယ်။ကျေနပ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘာသာသာသနာရေးကိစ္စ လူမျိုးရေးကိစ္စတွေ မှာတော့ ယခင်အစိုးရလက်ထက်အတိုင်း မထူးမခြားနား ပါဘဲ။ အတူတူပါဘဲ။ အခြားဟာသတွဲပြောရလျှင် ယခင် အစိုးရလက်ထက်က တစ်ရာဖိုးကားနှစ်စီးအဖြစ် အောက် ခြေလူတန်းစားက ကားဝယ်စီးနိုင်ပေမယ့် အခုအစိုးရ လက်ထက်မှာ ကားတစ်စီး တစ်ရာ့ငါးဆယ်ဖြစ်နေပါ တယ်။ လမ်းတွေတော့ကောင်းလာတာပေါ့။ ပိုရှင်းရှင်း လင်းလင်းမြင်စေချင်တော့ ယနေ့အစိုးရရဲ့နိုင်ငံရေး စီးပွားရေး အုပ်ချုပ်ရေးတွေက အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးရုပ်ရှင်ဇတ်ကားတွေနဲ့့တစ်ထပ်တည်းကျနေပါ တယ်။
မေး။ ။အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ လက်အောက်မှာ နိုင်ငံ သားအခွင့်အရေးတွေ၊ လူမျိုးရေးအခွင့်အရေးတွေ၊ ဘာသာရေးအခွင့်အရေးတွေ တန်းတူရရှိတယ်လို့ ခံစားရပါသလား။ မရရှိဘူလို့ဆိုရင် ဘာ့ကြောင့်လို့ ထင်ပါသလဲ။
ဖြေ။ ။တန်းတူအခွင့်အရေးမခံစားရ ပါဘူး။ တန်းတူမရရှိပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့က အစ္စလာမ်သာသနာဝင်တွေ ဖြစ်နေကြလို့ ပါဘဲ။ ယခင်အစိုးရလက်ထက်မှာ အစိုးရနဲ့ပြည်သူကြား မှာ ကျွန်တော်တို့ညှပ်ပိတ်မိနေတယ်။ ယခုအစိုးရလက် ထက်မှာ ကျွန်တော်တို့က အစိုးရ၊ တပ်မတော်၊ ပြည်သူ သုံးပွင့်ဆိုင်ကြားမှာ တံစားခံ မဖြစ်အောင် အနေအထိုင် အထူးသတိထားနေရသည့် ဘဝအခြေအနေဖြစ်နေ ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ စောင့်ကြည့်နေပါတယ်။ဘာလုပ်ရ မည်လည်း အကောင်းဆုံးပြင်ဆက်ထားပါတယ်။ အဓိကကတော့ ငြိမ်းချမ်းချင်တာပေါ့ဗျာ။
ဖြေ။ ။နောင်တတ်လာမည့် အစိုးရက ဖွဲ့ စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့အညီ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ဆောင်ရွတ်စေလိုပါတယ်။ နုတ်မိန့်နဲ့ပိတ်ဆို့ထားတဲ့ အုပ်ချုပ်မှုတွေ လူတန်းသားခွဲခြားထားမှုတွေ မရှိစေချင် တော့ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
မေး။ ။လူနည်းစုတွေအနေနဲ့ မိမိတို့ လူ့ အစုအဝေးကိုကိုယ်စားပြုတဲ့ ပါတီတွေ ဒါမှမဟုတ် တစ်သီးပုဂ္ဂလ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကို လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲတွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင် စေလိုပါသလား၊ ဘာ့ကြောင့် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင် သင့်မသင့်ကို ပြောပေးပါ။
ဖြေ။ ။ပါတီစုံ ဒီမိုကရေစီစံနစ်မှာ လူတစ်ယောက်၊ လူအုပ်စုလိုက်အစုအဖွဲ့အစည်း ကိုယ်ပိုင် ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ ကို ကျွန်တော်တို့ တားပိုင်ခွင့်မရှိပါဘူး။ မည်သို့မှ မှတ်ချက်မပေးပါဘူး။
ဖြေ။ ။၂ဝ၁၅ခုနှစ်တွင် ရွေးကောက်ပွဲ အနိုင်ရခဲ့တဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က ဦးဆောင် တဲ့ အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ ဆောင်ရွက်ချက်တွေကို အားရပါ သလားဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောရရင်တော့ အားရခြင်း၊ အားမရခြင်းဆိုတာထက် အနိုင်ရပါတီက ဦးဆောင် ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ လက်ရှိအရပ်သားအစိုးရအနေနဲ့ လူထု ရွေးချယ်တင်မြောက်လိုက်တဲ့ အရပ်သားစစ်စစ် အစိုးရတစ်ရပ်အဖြစ်ရပ်တည်ပြီး စီမံအုပ်ချုပ်ခွင့် ရနေပြီလား၊ အုပ်ချုပ်မှုအာဏာအပြည့်အဝရှိတဲ့ အစိုးရ လားဆိုတာကို ပထမဆုံးထည့်သွင်းစဉ်းစားရမှာ ဖြစ်တယ်။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က ဦးဆောင်တဲ့ အစိုးရရဲ့ခံယူချက်၊ ရည်ရွယ်ချက်၊ ဦးတည်ချက်တွေ အတိုင်းအုပ်ချုပ်နိုင်နေပြီလား။ အစိုးရအဖွဲ့ ဖော်ဆောင် လိုတဲ့အုပ်ချုပ်မှုပုံစံအတိုင်း ကျင့်သုံးအုပ်ချုပ်နိုင်နေပြီ လား။ ရွေးကောက်ပွဲကာလက ပေးထားတဲ့ ကတိကဝတ် တွေအတိုင်း စီမံပြီးလက်တွေ့ အကောင်အထည်ဖော်နိုင် နေပြီလား။ အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့စိတ်ရင်းစေတနာအတိုင်း အကောင် အထည်ဖော်လျှောက်လှမ်းနိုင်ပြီလားဆိုတာကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပေးရမှာဖြစ်တယ်။
ဖွဲ့စည်းပုံအကျပ်အတည်းနဲ့ ချုပ်နှောင်ထားမှုတွေကို မကျော်လွန်နိုင်သေးသရွေ့တော့ လူထုမျှော်လင့်ထားတဲ့ အတိုင်း အပြည့်အဝ ကျေနပ်အားရကြလိမ့်မယ် မဟုတ်ဘူးလို့တော့ မြင်ပါတယ်။
ဖြေ။ ။အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ လက်အောက်မှာ နိုင်ငံသား အခွင့်အရေး၊ လူမျိုးရေးအခွင့်အရေး၊ ဘာသာရေးအခွင့် အရေးတွေတန်းတူရရှိဖို့ဆိုတာ စစ်မှန်တဲ့ဖက်ဒရယ် ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရမယ်။ ပင်လုံစိတ်ဓာတ်နဲ့ ပင်လုံကတိကဝတ်တွေကို စိတ်ရင်း စေတနာမှန်နဲ့ လေးစားတန်ဖိုးထားပြီးတော့ လူမျိုးကြီး ဝါဒအ၊ ခြေမခံဘဲ၊ ပြည်ထောင်စုစနစ်ကိုအခြေခံပြီး တိုင်းပြည်ကို ပြန်လည်တည်ဆောက်ရမယ်။ အဓိက အရေးကြီးဆုံးလုပ်ဖို့ လိုအပ်တာကတော့ ဖက်ဒရယ် ဒီမိုကရေစီစံနှုန်းတန်ဘိုးတွေနဲ့ ကိုက်ညီဆီလျော်တဲ့ ဖွဲ့စည်း ပုံဖြစ်ဖို့ လက်ရှိဖွဲ့စည်းပုံကို လူထုဆန္ဒနဲ့အညီ ပြင်ဆင်၊ အသစ်ရေးဆွဲဖို့လိုအပ်တယ်။
မေး။ ။မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာ မှီတင်း နေထိုင်ကြတဲ့ လူနည်းစုများအခွင့်အရေးအတွက် ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်ရောက်မယ့်ပါတီတွေ ဒါမှမဟုတ် နောက်တက်လာမယ့်အစိုးရထံကနေ ဘယ်လို လုပ်ဆောင်ပေးချက်တွေကို လိုချင်ပါလဲ။
ဖြေ။ ။ ဒီမိုကရေစီလို့ဆိုလိုက်တာနဲ့ တရား မျှတခြင်း၊ တန်းတူညီမျှခြင်းဆိုတာ အနှစ်သာရဖြစ်တဲ့ အတွက် လူနည်းစုတွေရဲ့အခွင့်အရေးတို့၊ လူများစု အခွင့် အရေးတို့ ခွဲခြားပြီးဆက်ဆံနေတာကိုက ဒီမိုကရေစီ မဟုတ်ဘူးလို့မြင်ပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီဆိုတာ ဝါဒ၊ လမ်း စဉ်တစ်ခုလို့ပြောတာထက် ကျင့်စဉ်တစ်ရပ်လို့ပြောချင် တယ်။ ဒီမိုကရေစီကို အမှန်တကယ်ယုံကြည်လို့ တက်လာမယ့် အစိုးရမှန်သမျှဒီမိုကရေစီကျင့်စဉ်တွေကို ကျင့်ကြံအားထုတ်လေးစားလိုက်နာမှသာ ကိုယ်ကျိုး စီးပွားကင်းပြီး အခွင့်အရေးတန်းတူညီမျှမှာဖြစ်တယ်။
ဖြေ ။ ။အာဏာရှင်စနစ်အပြီးတိုင် ချုပ်ငြိမ်း ပြီး စစ်မှန်တဲ့ ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို ပြောင်းလဲဖော်ဆောင် နေတဲ့အချိန်မှာ ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီကို ဖော်ဆောင်မယ့် ဒီမိုကရက်တစ်တွေ အစိုးရဖွဲ့နိုင်ဖို့ စည်းစည်လုံးလုံး ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ပူးပေါင်းပြီး အင်နဲ့အားနဲ့ ဝိုင်းတွန်းပေး ကြဖို့ အရေးတကြီးလိုအပ်တယ်။ တိုင်းရင်းသားပြည်နယ် တွေမှာတော့ တိုင်းရင်းသားပါတီတွေ အားကောင်း မောင်းသန် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်အနိုင်ရဖို့နဲ့ ဒီမိုကရက် တစ်တွေနဲ့ ပူးပေါင်းပြီး ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီကို ပံ့ပိုးနိုင်ဖို့ အစိုးရအဖွဲ့မှာ ပါဝင်စေချင်ပါတယ်။
ဖြေ။ ။ နိုင်ငံသားလူနည်းစုဘာသာဝင် တစ်ဦးအမြင်အရပြောရရင် ယခင်ကထက် အမုန်းတရား ဟောကြားမှုတွေ အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေ စိုးတထင့် ထင့်နဲ့သွားလာ လှုပ်ရှားနေရတာတွေ အများကြီးလျော့ နည်းသွားပါတယ်၊ ပိုလုံခြုံမှုရလာတယ်လို့ ခံစားမိပါတယ်၊ ရာနှုန်းပြည့် အားရပါးရဖြစ်ရတယ်ဆိုတဲ့ အစိုးရမျိုးကို ဘယ်နိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံသားကမျှမရသေးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ပိုမိုအားရစရာကောင်းတဲ့ အခြေအနေတွေဆက်ဖြစ်လာ ဖို့ကိုတော့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ လက်ရှိဖြစ်ပေါ်တိုးတက် မှုတွေ ကိုလည်း အသိအမှတ်ပြုပါတယ်။ အတိုင်းအတာ တစ်ခုထိကို အားရပါတယ်။
ဖြေ။ ။ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ညီအစ်ကိုတော်အများစုကိုးကွယ်တဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာကဝိသေသဂုဏ်ထူးနဲ့ ပြည့်စုံတဲ့ဘာသာလို့ ပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်။ အလားတူ ကျန်နိုင်ငံသားတွေ ကိုးကွယ်တဲ့ခရစ်ယာန်၊ဟိန္ဒူ၊ အစ္စလာမ်ဘာသာတို့ကို လည်း အသိအမှတ်ပြုတယ်လို့ ဖော်ပြပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျန်ဘာသာတွေကအများစုကိုးကွယ်တဲ့ ဘာသာတရားနဲ့ ထပ်တူ ညီမျှတန်းတူဖြစ်ဖို့ မလွယ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် အခုအစိုးရရယ်မှမဟုတ်ပါဘူး။ ဘယ်အစိုးရတက်တက် အများစုကိုးကွယ်ရာနဲ့ လူနည်းစုကိုးကွယ်ရာတို့တွေက ထပ်တူဖြစ်လာဖို့မလွယ်ပါဘူး။ အခြေခံဥပဒေမှာ ဖော်ပြ ထားတာကြောင့်မို့လိုယူဆပါတယ်။ လက်တလော ပြင် ဆင်ချက်တွေမှာလည်း ပြင်ဆင်ရေးအပိုင်းမှ မပါပါဘူး။ ဒီပြဌာန်းချက်က ဆက်လက်တည်ရှိနေအုံးမှပါ။ တဖက် မှာလည်းနိုင်ငံတော်အသိအမှတ်ပြု ဘာသာသာသနာတွေ ကို သူ့အတိုင်း အတာနဲ့ သူအခွင့်အရေးပေးစေလိုတာမျိုး လိုအပ်ပါတယ်။ ဟာဂ်ျခရီးစဉ် ဟလလ်စားသောက်ကုန် စတာတွေ ပိုမိုချောမွေ့အောင် လူနည်းစုဘာသာဝင်တွေ ပိုအဆင်ပြေအောင် အုပ်ချုပ်ရေးနည်းလမ်း ဥပဒေပြုရေး နည်းလမ်းတွေနဲ့ ကူညီစောင့်ရှောက်ပေးစေလိုပါတယ်။ နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးရရှိရေးကို ဘာသာကိုး ကွယ်မှုကို အကြောင်းခံပြီးခွဲခြားတာမျိုး ကန့်သတ်တာမျိုး မရှိစေဖို့ ပိုအားထုတ်စေလိုပါတယ်။ နိုင်ငံသား လူနည်းစုဘာသာ ဝင်တွေ အကြားအမိနိုင်ငံတော်ကို ချစ်ခင်စိတ် သစ္စာ စောင့်သိရိုသေစိတ်တွေပိုအားကောင်းလာအောင် လူနည်း စုဘာသာဝင်တွေရဲ့ အခက်အခဲတွေပိုမို သိရှိလာစေဖို့ အုပ်ချုပ်ရေးဘက်ကပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိရှိနဲ့ ထိတွေ့ ဆက်ဆံရေးတွေများများ လုပ်ပေးစေလိုပါတယ်။
ဖြေ။ ။နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်းသည်သာပဓာနဆိုတဲ့မူဝါဒ အားကောင်းလာစေဖို့ မြေပြင်ထိရောက်အောင် လူအမျာစုဆီ ပြန့်နှံ့အောင် လက်ရှိအစိုးရအနေနဲ့ ရောနောက်နောင် တက်လာမယ်အစိုးရအနေနဲ့ပါ ကြိုးစားပေးစေလိုပါတယ်။ လူမျိုးရေးဘာသာရေး နိုင်ငံရေးဝါဒတွေ စုံလင်ကွဲပြား ရာကနေ ပက်ကြားအက်နေတဲ့ လယ်ကွင်းအိုလိုနိုင်ငံကို မဖြစ်စေချင်ပါဘူး။ ဒီအကွဲအဟတွေကို တစ်သားတည်း ဖြစ်စေအောင် လုပ်နိုင်တာကနိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်းသာ ပဓာနဆိုတဲ့ မူဝါဒလိုမြင်ပါတယ်။ ဘယ်ပါတီမဆို နိုင်ငံ သားသာပဓာနဆိုတဲ့မူကို ဆွဲကိုင်စေလိုပါတယ်။အမှန် တကယ် အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့လိုရှိရင် ကျန်လို အပ်နေတဲ့ အကန့်အသတ်ခံရတဲ့ နိုင်ငံသားအခွင့်အရေး တွေရသွားမယ်လို ယူဆပါတယ်။
ဖြေ။ ။အထက်ကဆိုခဲ့သလို နိုင်ငံသား ဖြစ်ခြင်းသာပဓာနဆိုတာ ပါတီတွေအုပ်ချုပ်သူတွေ အတွက်တင် မဟုတ်ပါဘူး၊ ပြည်သူတွေ အကြားမှာပါ လိုအပ်တဲ့တစ်ခုတည်းသော Identity ပဲဖြစ်ပါတယ်။ မတူတဲ့ဝိသေသလက္ခဏာကို ရှေ့တန်းဖို့ ဗိုလ်ချုပ်အောင် ဆန်းတို့ ဆရာကြီး ဦးရာဇာတ်တို့လို ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီးတွေ လမ်းမပြခဲ့ကြပါဘူး။ ကွဲပြားနေမှုကို ဘေးဖယ်ပြီးဘုံ တူညီတဲ့ဝိသေနကို ပေါ်လွင်စေဖို့ပဲမိန့်ကြားခဲ့ပါတယ်။ အုပ်ချုပ်သူတွေ အတွက်ရော ပြည်သူတွေအတွက်ပါ ဘယ်လိုနေထိုင်ရပ် တည်ရမလဲဆိုတာ အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီးတွေ ချမှတ်ခဲ့ပြီးသားပါ။ ဒီလမ်းစဉ်ကိုပဲ ယုံယုံကြည်ကြည် အကောင်အထည်ဖော်ပေးဖို့ လက်ခံကျင့်သုံးဖို့ပဲလိုပါတယ်။ မေးခွန်းကိုဖြေရရင် မတူကွဲပြားတဲ့ ဝိသေသတွေကို အားပေးမြင့်တင်ပေးမယ့် နိုင်ငံရေးပါတီတွေထက် တစ်သားတည်းဖြစ်ချင်းကိုအားပေးတဲ့ နိုင်ငံသား အခွင့် အရေးကို အာမခံတဲ့ပါတီကို အားပေးသင့်ပါတယ်။ လူနည်းစုမို့လို လူနည်းစုအရေးလုပ်မို့ ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်ပြိုင်တာထက် မြန်မာနိုင်ငံသားမို့လို နိုင်ငံ့အရေး လုပ်မို့ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်ပြိုင်ကြတာမျိုးပဲလိုလား ပါတယ်။အကွဲအဟတွေ အများကြီးအကြားမှာကိုယ် ကိုယ်တိုင်က အကွဲအဟတစ်ခု မဖြစ်စေချင်ပါဘူး။
ဖြေ။ ။ဒီချုပ်ကိုပဲမဲပေးပါမယ်။လူနည်းစု အခွင့်အရေးကို လေးစားရန် အသိပေးတိုက်တွန်း တောင်းဆိုသွားမယ်။
ဖြေ။ ။ အတိုင်းအတာတစ်ခုထိ ရရှိသည်ဟု ခံစားရပါတယ်။ တန်းတူညီမျှမှုပေါ်အခြေခံသော စစ်မှန်သည့် ဖယ်ဒရယ် နိုင်ငံအဖြစ်ရပ်တည်နေလိုပါ တယ်။
ဖြေ။ ။လူအခွင့်အရေး အပြည့်အဝခံစား လိုပါတယ်။ နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးလည်း အပြည့်အဝ နှင့် ရပ်တည်လိုပါတယ်။ လစ်ဘရယ်ဒီမိုက ရေစီမူပေါ် တွင်ပြတ်သားစွာရပ်တည်စေလိုပါတယ်။
ဖြေ။ ။လူနည်းစုအတွက်ပါတီရှိရပါမယ်။ ရွေးကောက်ပွဲတွင်လည်းပါဝင်စေချင်ပါတယ်။ အနိုင်ရ နိုင်တဲ့ပါတီနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်စေလိုပါတယ်။
ဦးကျော်စွာ (မြန်မာမွတ်စလင်အစည်းအရုံး – BMA)
ဖြေ။ ။လုံးဝ အားမရပါ။
ဖြေ။ ။ တန်းတူအခွင့်အရေးများ မရရှိပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် လူနည်းစုဘာသာဝင်များ အထူး သဖြင့် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များနှင့်ပတ်သက်သော လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို နေရာအတော်များများတွင် ယခင်မူအတိုင်း ဆက်လက်ကျင့်သုံးနေသည့်အပြင် အချို့နေရာများတွင် ပိုမိုတင်းကြပ်ခဲ့သည်များပင် ရှိခဲ့ ပါသည်။
ဖြေ။ ။လူမျိုးဘာသာ ခွဲခြားမှုမရှိဘဲ အခြား ဘာသာဝင်များနည်းတူ စစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ လူ့ အခွင့်အရေးကို လေးစားလိုက်နာပြီး နိုင်ငံသား တိုင်းတန်း တူအခွင့်အရေးကို ဦးစားပေးသင့်ပါတယ်။
ဖြေ။ ။လူနည်းစုများအနေဖြင့် မိမိတို့ အစုအဝေးမှ အရည်အချင်းပြည့်ဝသူများကို လာမည့် ရွေးကောက်ပွဲ၌ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်စေလိုပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီအခွင့်အရေး မိမိတို့ရဲ့နိုင်ငံသား အခွင့် အရေးကို ကျင့်သုံးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ မိမိတို့အစုအဝေးရဲ့ လိုအပ်ချက် အခက်အခဲများကို မိမိတို့ကသာ အသိနိုင် ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ လွှတ်တော်တွင်းမှာ မိမိတို့အစုအဝေးရဲ့ လိုအပ်ချက်များကို တင်ပြတောင်းဆိုနိုင်ရန်ဖြစ်ပါတယ်။◾
← သနျးငါးဆယျကြျောအကြိုးကြေးဇူးရှေးရှုပွီး တိုငျးပွညျခဈြစိတျရှိရနျ ကိုမွအေးပွော
Omni Focus လဆေိပျကားပျေါ၌ ဝူဟနျဗိုငျးရပျ သံသယရှိသူဟုဆိုသူမှာ သာမနျဖြားနာခွငျးသာဖွဈဟုဆို →
March 8, 2020 March 8, 2020 FridayTimes 0
မန်တလေးနှဈသဈကူးည ဒဏျရာရရှိသူ ၅၉ဦး ဆေးရုံကွီးသို့ရောကျရှိပွီး ယခငျနှဈကထကျ လြော့နညျး
January 1, 2020 January 1, 2020 FridayTimes 0